उरुग्वेको बलियो रक्षापक्ति छिचोल्न सक्लान रोनाल्डोले ? - Everest Dainik - News from Nepal
उरुग्वेको बलियो रक्षापक्ति छिचोल्न सक्लान रोनाल्डोले ?
रसियामा जारी २१ औं संस्करणको विश्वकप फुटबल अनतर्गत आज बलियो रक्षापक्ति भएको उरुग्वे र पोर्चुगल भिड्दै छन् । उनीहरुबीचको खेल शनिबार राति पौने १२ बजे सोची रङशालामा शुरु हुने छ ।
पोर्चुगल उरुग्वेविरुद्ध जब मैदानमा उत्रिने छ उसको फ्यानहरुको मनमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुने छ यदि आज रोनाल्डो चलेनन् भने के होला ? रोनाल्डोको एकल प्रयासले पोर्चुगल नकआउट चरणसम्म पुगेको फुटबलका जानकार बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस अष्ट्रलियाद्वारा डेनमार्कविरुद्ध पहिलो गोल
उनको प्रदर्शनलाई अगल गर्ने हो भने पोर्चुगलको प्रदर्शन विर्सन लायक देखिन्छ । उता दुई पटकको विश्व विजेता उरुग्वेले भने लीग चरणका खेलमा टीम वर्क गजबको देखायो वा समग्रमा सामूहिक खेल प्रदर्शन गर्यो । जसमा लुइस सुआरेज, ऐन्डिसन कभानी र कप्तान डिएगो गोडिनले टोलीको जितका लागि अहम भूमिका निभाए ।
याे पनि पढ्नुस अमेरिका, चीन र रुसबीच अस्त्र बनाउने प्रतिस्पर्धा
उरुग्वे जारी विश्वकपकाे एउटामात्र यस्तो टीम हो जसले एउटा पनि गोल नआएर नकआउट चरण पुगेको छ । गोडिन एटलेटिको क्लबबाट खेल्छन् । जसको रक्षापक्ति युरोपभरको क्लबमा सबैभन्दा बलियो मानिन्छ । यसैको प्रभाव हुनसक्छ उरुग्वेले सन २०१८ को छ वटा खेलमा एउटा पनि गोल खाएको छैन ।
याे पनि पढ्नुस ब्राजिल र कोष्टारिकाबीचको खेल शुरू, नेइमारले आज कति गोल गर्लान ?
रोनाल्डोले जारी विश्वकपमा चार गोल गरिसकेका छन् । जसमा स्पेनविरुद्धको बराबरी खेलमा ह्याट्रिक गर्दै तीन गरे । उनको नाममा युरोपबाट ८५ अन्तराष्ट्रिय गोल गर्ने कीर्तिमान छ ।